Ngathi | Zhejiang Shawei Digital Technology Co., Ltd.
IShawei Digital ibekwe kwiphondo laseZhejiang, eyasekwa ngo-1998, ingcali kwiNdawo yeNtengiso yeNdawo nangaphandle. UShawei Digital ungumnini wamasebe ali-11 kulo lonke elaseTshayina, ishishini ligubungela ukuvelisa, ukuthengisa, ukuthumela kunye nokushicilela.
Eyona mveliso iphambili yokhuphiswano luluhlu lwe-Self Adhesive, i-Light Box Series (i-Frontlit kunye ne-Backlit), i-Wall Decoration Series kunye ne-Display Props Sereis. Imithombo yeendaba igubungela ukusuka kwisisele ukuya eludongeni ukuya kumgangatho, ilungele iDayi, i-pigment, i-UV, i-HP iLatex, iSolvent kunye ne-Eco-solvent.Shawei Digital igcina ukwenziwa kwezinto ezintsha kusetyenziso, kunye neemveliso ezintsha eziphuhliswayo. kwintengiso, olu hlobo ligubungela ifomathi enkulu yemidiya yokushicilela kunye nobubanzi beMax yi-5M. Kwaye uphawu lwe-MOYU lukwabonelela ngemithombo yeendaba "yokushicilela yasimahla ye-PVC" ukuphendula kuKhuseleko lweNdalo esingqongileyo.
I-Shawei Digital inokubonelela ngobukhulu obahlukeneyo ukusuka kuJumbol roll, roll mini ukuya kwimakhishithi kunye nobungakanani be-A3 / 4. Zama konke okusemandleni akho ukuhlangabezana neemfuno zakho ezizodwa.Iimveliso ziyathengiswa eMntla Melika, eMzantsi Melika, eYurophu, mpuma mpuma Asia.
Zonke iimveliso ezisemgangathweni zilawulwa kakhulu yinkqubo yethu ye-QC, zonke izinto ziveliswa kwivenkile yomsebenzi yasimahla kwaye sine-R & D yethu ukujonga yonke inkqubela phambili. Okwangoku, ukuhamba kwe-QC kuya kusebenzisa izixhobo eziphambili ukujonga umgca ukusuka kwimveliso eluhlaza ukuya kwiimveliso zokugqibela.
Ukulungiselela ukubonelela ngeenkonzo ezingcono kwintengiso ye-ou, sihlala sisiya kwi-SGIA, APPP, SIGN CHINA, umboniso weFESPA kwihlabathi liphela, uqokelele ingxelo yabathengi bethu kwaye uphuhlise izinto ezintsha kubo. I-Shhawei Digital liqela elinokukunika:
Iimveliso zethu zinekhwalithi elungileyo kunye nekhredithi yokuvumela ukuba sikwazi ukuseta iiofisi zamasebe kunye nabasasazi kwilizwe lethu. Kwaye iimveliso ezingaphezu kwe-1000 zeemveliso zinokukhethwa ngokukhetha kwakho.Imveliso yeemveliso igubungela ukusuka ngaphakathi ukuya ngaphandle.